Trump Kupa chigunwe kuWHO kunouraya kwete maAmerican chete
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Trump Kupa chigunwe kuWHO kunouraya kwete maAmerican chete
Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kudhonza United States of America kubva mu World Health Organization (WHO) kuvhunduka kwete kwete kune vazhinji veAmerica, asi iri kupfira mate kumeso kwevanhu makumi matatu nevatanhatu nemakumi masere negumi nevatatu vakarasikirwa nehupenyu hwavo kuchirwere cheCOVID-368,418. Nhamba yakakura iri muUnited States inosvika 19 vekuAmerica vakafa. Izvo 'ichaparadzanisa United States kunyangwe kubva kune yepasirese pasirese, kubva kune vanobatana nevavengi.
Nyika yese inofanirwa kuve yakabatana mukurwira kutyisidzira kukuru kuri kuitika pasi rino kwenguva zhinji yeupenyu hwedu.
Pakati pechinetso ichi uye panguva iyo kubatana uye kwete kupokana ndiyo nzira yekumberi, Mutungamiri weUS Donald Trump akasarudza kusangana.
Vazhinji vevamiriri vemitemo veUS vanoziva izvi uye vanovhunduka. Izvi zvaisanganisira Congressman David Mutengo kubva kuNorth Carolina uyo akaburitsa chirevo pane chiziviso chaMutungamiri Trump chekuti anoda kubvisa United States kubva kuWorld Health Organisation uye kubvisa kurapwa kwakakosha kuHong Kong.
Musangano wecongress akati: "Mutungamiri Trump akabvarura peji kubva mupendero bhuku remapapiro kurudyi paakazivisa nhasi kuti United States ichatora World Health Organisation. Panguva iyo iyo United States iri kutambura kubva pamusoro pevanhu vanopfuura zviuru zana vakafa COVID-100,000, danho rekuzviparadzanisa nekusarudza zano re'America chete 'kurwisa hutachiona hwusingazive miganhu kuri pamusoro pekunzwisisa chete.
"Kune mumwe munhu anoti akaomarara kuChina, President Trump vari kupa Beijing simba rakakura kwazvo pasi rese nekubvisa United States munhandare, kudonhedza vatinoshanda navo, uye nekupindura kunetsa kuHong Kong zvisina kukodzera pasina kudzivirira democracy. kodzero dzevanhu idzo dzakarwirwa zvakanyanya nevanhu veHong Kong.
“Hutungamiri hweAmerica pasi rose hwave panjodzi. Hutungamiri hunobudirira hausi kushungurudza, kukanganisa, uye kusiya shamwari dzedu. "Ino haisiriyo nguva yekunzvenga mabasa edu - inguva yekutungamira, kubatana, uye kuratidza zvatakamira uye nezvatakagadzirwa."
Kuzviparadzanisa kweAmerica mukurwira COVID-19 kunouraya vanhu vazhinji, uye ichapatsanura United States zvakanyanya kubva kune dzimwe nyika uye kubva kune izvo zvaizivikanwa neAmerica kuchengetedza - rusununguko!
"Izvi zvichave zvakare kutyisidzira nekuti zvine mhedzisiro yakanangana neindasitiri yerunyararo yakakura - kushanya," akadaro Juergen Steinmetz, sachigaro we #ruchikara
Ipo United States ichipa munwe kuWHO, World Health Organisation yakaburitsa kuburitswa uku mukubatana pamwe nekubatana.
Nyika makumi matatu nevazhinji vanobatana nenyika dzepasi rose nemasangano akasaina kutsigira COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), chirongwa chakanangana nekugadzira mishonga yekudzivirira, bvunzo, kurapwa uye humwe hunyanzvi hwehutano kurwisa COVID-19 kuti iwanikwe kune vese.
Dziva rakatanga kurongerwa munaKurume naMutungamiri Carlos Alvarado wekuCosta Rica, uyo akabatana neMutungamiriri-Mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus nhasi panotangwa chirongwa ichi zviri pamutemo.
"COVID-19 Technology Access Pool ichaita kuti sainzi ichangoburwa neyakanakisa ibatsire vanhu vese," akadaro Mutungamiri Alvarado wekuCosta Rica. "Majekiseni, bvunzo, kuongororwa, kurapwa, uye zvimwe zvishandiso mumhinduro yecoronavirus inofanira kupihwa pese pese sezvinhu zveveruzhinji zvepasi rose."
"Kubatana kwepasirese pamwe nekubatana kwakakosha mukukunda COVID-19," akadaro Director-General weWD Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Kubva pasainzi yakasimba uye kubatana pachena, iyi yekugovana ruzivo ichabatsira kupa mukana wakaenzana kumatekinoroji anoponesa hupenyu pasirese."
Iyo COVID-19 (Tekinoroji) Yekupinda Padziva ichave yekuzvidira uye yakavakirwa pasocial kubatana. Ichapa imwe-yekumira shopu yesainzi ruzivo, dhata, uye nehungwaru pfuma kuti igovane zvakaenzana nenharaunda yepasi rose.
Chinangwa ndechekuchimbidza kuwanikwa kwejekiseni, mishonga, uye mamwe matekinoroji kuburikidza neyakavhurika-sainzi research, uye nekukurumidza-kuronda kugadzirwa kwechigadzirwa nekusimudzira imwe yekuwedzera kugona. Izvi zvinobatsira kuona nekukasira uye nekuenzana kuwana kune zviripo uye zvitsva COVID-19 zvigadzirwa zvehutano.
Pane zvinhu zvishanu zvakakosha pakuita izvi:
Ruzhinji kuburitswa kwemajini akateedzana uye data;
Kujeka kutenderera kuburitswa kweese makiriniki ekuyedza mhedzisiro;
Hurumende nevamwe vanopa mari vanokurudzirwa kuti vaise zvikamu muzvibvumirano zvemari nemakambani emishonga uye nevamwe vagadziri pamusoro pekugoverwa zvakaenzana, kugona, uye kuburitswa kwedata rekuyedza;
Kupa marezenisi chero kurapa kungavepo, kuongororwa, kubatira, kana humwe hunyanzvi hwehutano kuMedicines Patent Pool - sangano rehutano renyika reUnited Nations rinotsigirwa iro rinoshanda kuwedzera mukana wekuwana, uye kugonesa kuvandudzwa kwemishonga inoponesa upenyu yepasi- nepakati- nyika dzinowana mari; uye
Kukwidziridzwa kweakavhurika emhando yemhando uye tekinoroji kuchinjisa iyo inowedzera yekugadzira yemuno uye kugona kugona, kusanganisira kuburikidza nekujoinha iyo Open COVID Pledge uye neTekinoroji Kubatana Kudyidzana (TAP)
Iine nyika dzinotsigira pasi rose, C-TAP ichashanda sehanzvadzi danho kuKuwana kweECVID-19 Zvishandiso (ACT) Accelerator uye mamwe matanho ekutsigira kuedza kurwisa COVID-19 pasirese.
WHO, Costa Rica nenyika dzese dzakabatsirana dzakaburitsawo "Solidarity Call to Action" ichikumbira vane chekuita kuti vabatane uye vatsigire chirongwa ichi, nezviito zvakakurudzirwa kumapoka akakosha, senge hurumende, vatsvagiri nekusimudzira mari, vaongorori, indasitiri. , uye nzanga.
WHO neCosta Rica vakabatana nhasi chiitiko chekuparura, icho chakatanga nechikamu chepamusoro chakatariswa neMukuru-General weWHO uye Mutungamiri Alvarado mukuwedzera kuna Prime Minister Mia Mottley weBarbados naAksel Jacobsen, Munyori weNyika, Norway. Paive nemataurirwo evhidhiyo naMutungamiri Lenín Moreno weEcuador; Mutungamiri Thomas Esang Remengesau Jr., wePalau; Mutungamiri Lenín Moreno weEcuador; , Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner wekodzero dzevanhu; Jagan Chapagain, Secretary General weInternational Federation yeRed Cross neRed Crescent Societies; naRetno Marsudi, Gurukota rezvekunze kweIndonesia. Vatungamiriri vanobva mhiri kweUN, academia, maindasitiri, pamwe nemasangano evagari vakabatana pamusangano unogadziriswa.
Parizvino, iyo COVID-19 Technology Access Pool yave kutsigirwa nenyika dzinotevera: Argentina, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Bhutan, Brazil, Chile, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Honduras, Indonesia, Lebanon, Luxembourg, Malaysia, Maldives, Mexico, Mozambique, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Peru, Portugal, Saint Vincent neGrenadines, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Netherlands, Timor-Leste, Uruguay, neZimbabwe.
Mamwe masangano epasirese, vanobatsirana, uye nyanzvi vakaratidzawo rutsigiro kuchirongwa ichi uye vamwe vanogona kubatana navo vachishandisa Website.
Zvimwe pamusoro kuvakazve kufamba Enda ku www.rereiting.travel